Ahoana ny fambolena sary an-tserasera amin'ny alàlan'ny programa | Famoronana an-tserasera
Alaivo an-tsaina hoe naka sary mahafinaritra ianao, iray amin'ireo izay tsy miverina intsony amin'ny fiainana. Ary ianao dia haingana be ka nahavita naka ny fotoana. Na izany aza, hitanao rehefa nojerena akaiky ianao fa misy lesoka mahatsiravina. Angamba ny rantsan-tànanao lasa nifantoka, angamba zavatra izay mahatonga ny iray manontolo ho ratsy tarehy. Ary inona no ataonao izao? Eny, zavatra tsotra toy ny fanapahana sary an-tserasera.
Tsy mila matihanina ianao, na mandoa fandaharana fakana sary mba hahafahana manamboatra ireo sary ireo ary mijanona amin'izay tianao ihany. Ny hany ilainao dia ny hidina hiasa sy hahita ny pejy tsara indrindra hianarana ny fomba famolavolana sary an-tserasera mora sy haingana. Tsy maka sary intsony satria misy zavatra mivoaka izay tsy tokony, izao dia azonao atao ny mampiasa izay tena miasa avy amin'ilay sary.
1 Azo antoka ve ny mampiasa programa famandrihana sary amin'ny Internet?
2 Ahoana ny fambolena sary amin'ny Internet: ny programa maimaim-poana tsara indrindra
2.7 Ahoana ny fambolena sary amin'ny Internet: IMG2GO
2.8 Ahoana ny fambolena sary amin'ny Internet: Pinetools
Azo antoka ve ny mampiasa programa famandrihana sary amin'ny Internet?
Alohan'ny hiresahanay aminao ny sasany amin'ireo programa maimaim-poana sy tranokala maimaim-poana amin'ny Internet, andao hijanona ary hieritreritra kely momba ny "fiantraikany" mety hananan'ny fandefasana sary amin'ny Internet. Ary io dia, minoa na tsia, misy pejin-tranonkala marobe, saika izy rehetra, izay, rehefa mampakatra ilay sary ianao dia very ny fahafahanao mamolavola azy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tsy fantatrao raha mamafa azy ireo izy ireo, na ampiasaina amin'ny fampiasana hafa ...
Ohatra, azonao atao ny mampakatra ny sarin'ny zanakao vavy hanapaka azy ary, taona maro taty aoriana, tadiavo ao amin'ny banky sary maimaimpoana izy; na ratsy kokoa, any amin'ny banky izay tsy tokony atolotra. Mety misy izany satria eo tokoa rehefa mampakatra ny sary ianao any aoriana dia tsy fantatrao izay ataon'io pejy io, raha mamafa azy io na tsia.
Ny pejy sasany amin'ny fampandrenesany ara-dalàna na amin'ny toe-javatra misy azy dia mampitandrina ny zava-mitranga; ny hafa kosa tsy. Misy tranokala mamela anao hamafa ny fisie rehefa avy niasa taminao. Saingy azonao atao foana ny manontany tena raha tena tsy misy soritry ny sarinao raha vao manapa-kevitra ny hamafa azy ianao.
Noho izany, nanoro hevitra ireo manam-pahaizana fa, rehefa manitsy sary, na manodikodina azy ireo na manangona sary an-tserasera, dia mety izany mampiasa pejy izay mamela anao hifehy ny sary ampidirinao, na manome anao izy ireo dia manome antoka fa tsy hamidy amin'ny antoko fahatelo ireo sary ireo, na koa horavana afaka fotoana fohy.
Ahoana ny fambolena sary amin'ny Internet: ny programa maimaim-poana tsara indrindra
Amin'ity tranga ity, te handao anao maromaro izahay safidy mihoatra ny Photoshop mahazatra na GIMP azonao atao amin'ny solosainao. Ny ankamaroan'ireny fitaovana ireny dia tsy mifantoka amin'ny lahasa iray fotsiny, toy ny fanapahana sary an-tserasera, fa editera ihany. Midika izany fa afaka manova ny sarinao ianao. Mazava ho azy fa ny sasany hanana safidy hafa noho ny hafa, ka miankina amin'ny "fahaizanao" hahatratraranao vokatra iray na iray hafa.
Ary na dia nilaza aza izahay fa hanome safidy hafa ankoatra an'ity programa ity izahay dia tsy azonay sorohana izany satria eny, misy Photoshop amin'ny Internet. Izy io dia momba ny Photoshop Express, ary misy amin'ny teny Espaniôla.
Ny zavatra tsara momba ity programa ity dia izay mahazo kalitao tsara ianao ary mora be ny mampiasa azy, Ho fanampin'izay, asehony anao ny fanovana alohan'ny hampiharana azy ireo, ka raha tsy mahafapo anao izy ireo dia aza ampiasaina. Mazava ho azy fa tsy misy sosona izy io ary tsy manana fitaovam-pifidianana.
Ary hanangona sary an-tserasera? Tonga lafatra izy io. Mila manokatra ny sary ao amin'ny tonian-dahatsoratra fotsiny ianao ary mampiasa ny fitaovan'ny vokatra mba hamehezana ny ampahany amin'ilay sary tianao ho azo. Avy eo dia mila mitahiry azy ho sary vaovao ianao ary dia izay.
Betsaka no milaza fa ny Pixrl dia toy ny Photoshop, saingy maimaim-poana. Ary ny marina dia marina ny azy ireo. Raha izay tianao dia mianatra miompy sary an-tserasera, ankoatra ny fanomezana valiny avo lenta ho azy ireo, manova lafiny hafa, dia ity programa ity angamba no tadiavinao.
Manana fitaovana sy sivana maro ianao izay mety hahatonga anao handany ora maro eo alohan'ilay solosaina hamerenana amin'ny laoniny ny sary (ary nandany azy fotsiny ianao).
Raha ny pejy tadiavinao dia pejy iray manandanja indrindra amin'ny fanitsiana sary, dia manana BeFunky ianao. Izy io dia tranonkala iray izay tsy hanana afa-tsy vakizoro enina (ary ao anatin'izy ireo ny sivana sy ny vokany manokana). Fa araka ny ho hitanao, ny iray amin'ireo lehibe dia ny mampihena. Raha izany no tadiavinao dia ho haingana dia haingana ny fampiasana azy, ary misy valiny lehibe.
Mazava ho azy, tsy maintsy tadidinao izany Miresaka momba ny fitaovana "voafetra" izahay, ary ho an'ny vokatra sy fanitsiana sasany dia mila mandoa ianao, izay mampihemotra anao be. Fa raha tsy hampiasa azy io fotsiny ianao amin'ny fototra, toy ny fanapahana sary an-tserasera, dia mihoatra lavitra noho izay omeny anao izany.
Manohy miaraka amina tranonkala iray hafa izahay izay manome anao fitaovana mety hanovana sary. Raha ny tena manokana, ny fomba fanapahana sary an-tserasera dia iray amin'ireo tsara indrindra, satria manana safidy isan-karazany. Ilay tokana izay tsy afaka foana izy io; Izy io dia manana safidy premium izay azonao andramana mandritra ny 7 andro fotsiny.
Ity dia ankafizin'ny mpamorona sary, mpaka sary sns. Ary ny marina dia nahazo ny tenany ho iray amin'ireo safidy fanovana sary tsara indrindra izy. Anelanelan'ny fanontana ireo, azo zahana koa ny cropping sary, ary koa ny fanitsiana ny famirapiratanana, mamadika ny sary, mampiditra sivana ...
Ianao ve mila fitaovana izay haingana kokoa hampiasaina ary mandeha amin'ny zavatra manapotika sary an-tserasera fotsiny? Avy eo manana ILoveIMG ianao. Ao fotsiny no mila safidio ireo sary hiarahanao miasa ary ampakarinao.
Raha vantany vao manao izany ianao dia hahazo efamira na efa-joro iray izay azonao atao manitatra na mampihena arakaraka ny filanao ary bokotra lehibe (izay mirehitra indraindray), mba hahafahanao manapaka azy. Raha manao izany ianao dia hamokatra ho azy avy eo ary omena anao ilay sary voakapa.
Ahoana ny fambolena sary amin'ny Internet: IMG2GO
Ny iray amin'ireo fitaovana fanapahana sary dia IMG2GO, izay Hanampy anao irery izy io amin'ny famokarana sary sy sary. Ary inona no tokony hataonao? Ny zavatra voalohany, mampakatra ny sary. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny Google Drive, Dropbox na ny fidirana amin'ny URL.
Vantany vao nakarina ianao, dia hiseho eo amin'ny monitor ny sary sy ny efa-joro (mitsivalana) azonao afindra. Azonao atao ihany koa ny manova ny habeny (manana safidy maromaro ianao ankoatra ny fahafahanao mametraka ny haavony sy ny sakany).
Raha vantany vao azonao izany, kitiho ny bokotra APPLY ary avy eo tahirizo mba hampidinana ilay sary izay notapahinao ihany.
Ahoana ny fambolena sary amin'ny Internet: Pinetools
Ity fitaovana hafa ity dia haingana kokoa ary mora ampiasaina satria, rehefa mampakatra ny sary ianao dia hiseho ny kianja iray izay azonao atao ny manova ny habeny araka ny itiavanao azy mba hanapaka afaka segondra vitsy. Ny valiny azonao atao topi-maso mialoha mba hahazoana antoka fa ho tonga amin'ny fomba tianao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ahoana ny fambolena sary amin'ny Internet